Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo Mooshin laga gudbiyay | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo Mooshin laga gudbiyay
Wararka ka imanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir loo gudbiyay Guddoomiye kuxigeenka Koowaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug.
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa wararku ay sheegayaan inuu aqbalay mooshinka laga keenay guddoomiye Cali Gacal Casir.
Xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka galmudug ayaa ku sababeeyay in uu gabay shaqadii loo igmaday ayna tahay mid lagama maarmaan ah in lala xisaabtamo.
Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Galmudug Xareed ayaa sheegay in xildhibaano tiradoodu ku dhowdahay sagaashan ay ka keeneen mooshinka guddoomiyaha ayna tahay sharci in laga doodo maalmaha soo socda.
Hase yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal ayaa ka horyimid mooshinka laga gudbiyay waxana uu ku tilmaamay mid been abuur ah ayna sax ahayn xildhibaanada la sheegay inay mooshinka ka gudbiyeen.
Mooshinka laga gudbiyay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa waxa uu salka ku hayaa khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sareysa maamulka Galmudug, waxaana uu guddoomiyaha baarlamaanka galmudug uu ka horyimid go’aanka ka soo baxay Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada oo ay ku hakiyeen la shaqeynta dowlada federalka.
Previous articleMadaxda dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo ka qeybgalay munaasabada furitanka xadka labada dal
Next articleFaahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya iskahorimaad hubeysan oo ka dhacay deegaanka CeelMacaan